बनभोज खान बिहूँ गएका धौलागिरी माबिका एक बिद्यार्थीको मोटरसाईकल दुर्घटनामा मृत्यु ! – ebaglung.com
२०७५ मंसिर १०, सोमबार १६:०८	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
गुमानसिंह भण्डारी, गल्कोट २०७५ मंसिर १० । गल्कोटमा मोटरसाईक दुर्घटना हुदाँ एक जनाको ज्यान गएको छ । गल्कोट नगरपालिका १ दुदिलाभाटीको चौराहमा ध १ प २७८१ नम्बरको मोटरसाईकल दुर्घटना हुदाँ धौलागीरी माद्यमिक बिद्यालय बागलुङ नगरपालिकाका अनिल सापकोटाको मृत्यु भएको हो । सापकोटाको टाउको फुटेको र खुट्टा भाचिएको नरेठाटी प्रहरी चौकीले जनाएको छ । मृतक सापकोटा कक्षा १२ मा अध्ययनरत बिद्यार्थी हुन ।
सोहि मोटरसाईकलमा सवार कक्षा १० मा अध्ययनरत संगम पन्तको बाया हात भाचिएको र कम्मरमा चोट लागेको स्थानिय गुमानसिह बुढाथोकीले बताए । घाईते पन्तलाई हटिया स्थित ईमरजेन्सी पोलिक्नििकमा उपचार भईरहेको छ । पन्तलाई थप उपचारका लागी पोखरा पठाउन लागीएको अस्पतालले जनाएको छ ।
उनिहरु धौलागिरी माद्यमिक बिद्यालयबाट बनभोजका लागी गल्कोट र काठेखोलाको संगम स्थल भ्यु टावरमा आएका बिद्यालयले जनाएको छ । बनभोजमा आवश्यक सामाग्री लिएर हटिया देखि भ्यु टावर जादै गर्दा झाक्री स्थानमा दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
कुराकानी : कस्तो बन्दैछ, तिरुपति बालाजी धाममा शालग्राम संग्रहालय ? के भन्छन, ऋषि प्रपन्नाचार्य ?